बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु हाम्रो लागी कति राम्रो बानी हो ? – tshorolpa
Home/मुख्य समाचार/बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु हाम्रो लागी कति राम्रो बानी हो ?
बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु हाम्रो लागी कति राम्रो बानी हो ?
News ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०७:११
काठमाडौं ७ असोज। नेपालीले पिउने धेरै चिया पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीहरुको चलन नै बनेको छ। कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न पनि सक्दैनन् । धेरै जसोले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु हाम्रो लागी कति राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने पनि विभिन्न संचार माध्यमबाट देखाएका छन् । हामीले पिउने चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने एण्टिअक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ।
चिया पिउनुका फाइदा नभएका होइनन् फाइदा छन् । तर खाली पेटमा पिउने, धेरै पिउने र धेरै गुलियो चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । दूध चिया भन्दा कालो चियाले फाइदा गर्छ तर कालो चिया पनि धेरै पिउनु हुदैन ।
दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाउदै आएको छन् ।
ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापिएको अध्ययनअनुसार तातो चिया पिउने मानिसमा खाना खाने नली तथा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना आठ गुणाभन्दा बढी हुन्छ ।
१५ चैत्र २०७६, शनिबार ०८:१५
कुलमान घिसिङ लाई निरन्तरता दिन नारायणकाजी श्रेष्ठको माग
२९ भाद्र २०७७, सोमबार १६:१२
धुलिखेलमा माइक्रो दुर्घटना १७ घाइते ,एक को अबस्था गम्भीर
८ आश्विन २०७७, बिहीबार १८:१७
जिप दुर्घटना हुँदा बेहुला–बेहुलीसहित बैतडीमा१२ जना घाइते,
१३ बैशाख २०७८, सोमबार ०८:५०